आलियालाई दीपिकाको अनौठो चिठ्ठी, के छ चिठ्ठीमा ? - Gaule Media ::
Home/मनोरञ्जन/आलियालाई दीपिकाको अनौठो चिठ्ठी, के छ चिठ्ठीमा ?
ramsharan१९ कार्तिक २०७४, आईतवार १४:२१
बलिउडका नायिकाहरुबीच आपसी सम्वन्ध त्यति राम्रो छैन । कसैको फिल्म खोसेको निहुँमा त कसैको व्वाइफ्रेण्ड खोसेको निहुँमा एक-अर्कालाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैनन् ।
तर, दीपिका पादुकोण र आलिया भट्टको कुरा अलग छ । उनीहरु एक-अर्काको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । दीपिकाको नयाँ फिल्म पद्मावतीको ट्रेलर हालै सार्वजनिक भएको छ । आलियाले उक्त ट्रेलरलाई लिएर दीपिकाको जमेर प्रशंसा गरिन् ।
एउटा पोडकास्टमा आलियाले दीपिकाको बारेमा भनिन्, ‘पद्मावतीको रुपमा दीपिका साह्रै राम्री देखिएकी छिन् । मलाई थाहा छ कि म कहिल्यै उनीजस्तो देखिन सक्दिन । न उनीजस्तो गर्न नै सक्छु । दीपिका विलकुल रानीजस्ती देखिएकी छिन् । मलाई विश्वास छ उनले फिल्ममा काम पनि शानदार गरेकी छिन् ।’
यसमा दीपिकाले टि्वट गर्दै आलियालाई जवाफ दिएकी थिइन् । उनले लेखिन्, ‘माइ आलू… यू मेक नो सेन्स… लभ यू ।’
तर, त्योभन्दा दुई कदम अघि बढेर दीपिकाले आलियालाई एउटा चिठ्ठी नै पठाइन् । त्यो पनि एउटी फ्यानको रुपमा । लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स २०१७ को प्रोमोमा आलियालाई दीपिकाले यो चिठ्ठी दिएको देख्न सकिन्छ । इन्स्टाग्राममा पनि यसको एउटा भिडियो सेयर भएको छ ।
चिठ्ठीमा दीपिकाले लेखेकी छिन्ः
‘हाइवे’ मा तिमी बिना मेकअप पनि असाध्यै सुन्दरी देखिएकी थियौ । तर सडकमा बिताएका ती ५२ कठिन दिन कसैले थाहा पाएनन् । आलिया, तिमी छौं सबैभन्दा सानी, तर मेहनत गर्नमा सबैभन्दा ठूली ।
तिम्री सबैभन्दा ठूली फ्यान
दीपिका र आलियाको यो मित्रता देखेपछि भन्न करै लाग्छ कि बलिउडमा नायिकाहरुबीच मित्रता र प्रेमको युग सुरु भएछ ।
राति-राति ओछ्यानमा के-के गर्छिन् रेखा थापा ?
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०५:११